2007 Biko weta ndị editọ ọhụrụ | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 26, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Otu n'ime m Amụma n'ihi na 2007 bụ ihe nchịkọta akụkọ ọhụrụ maka weebụ nwere arụmọrụ 'edit in place'. Enwere m mmasị n'echiche nke idezi n'ọnọdụ… kama ịbanye site na nchịkwa dị iche, onye ọrụ nwere ike ịmalite ịpịnye ihe ma wuo ha HTML n'ụzọ ha chọrọ.
Ndị a bụ ụfọdụ ndenye ederede na Dezie na Ebe site n'aka Joseph Scott. Ọ bụrụ na ị bụghị onye mmemme na ị na-eche ihe m na-ekwu maka ya, lee ibe akwukwo atụ. Joseph nwere obi oma ime ka oru ya nile di na nbudata.
Ana m atụ anya ka onye na-edepụta ihe ọhụrụ editọ n'adịghị ka Ndagide ederede Microsoft Okwu nke yiri ka ọ na-apụta ebe niile na weebụ. Ọ dị ka a ga-asị na Microsoft na-agba akwụkwọ na nke ahụ yana Office 2007 na ihu 'Ribbon' ọhụrụ. Ọ dị njọ na Office dị ugbu a (ọ nwere onye ọ bụla ga-enweta mgbọ ga-arụ ọrụ ọfụma?), Ugbu a, anyị ga-ahụ ya na weebụ niile? Ọbụna Google Docs na-eji nchịkọta yiri nke ahụ (na mgbọ anaghị arụ ọrụ ebe ahụ, ma).
Anyi choro uzo ohuru maka edezi akwukwo, ihe ngosi, html, email wdg. Dezie na ebe nwere ike ibido usoro a. Aguru m nnukwu okwu na Mavericks na-arụ ọrụ: Ihe kpatara Mkpụrụ Obi Mbụ na Business Na-emeri izu ụka a site na ING Direct's Arkidi Kuhlmann:
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe otu ọ bụla mmadụ si eme ha, kedụ ihe ị chere ị ga - eme nke ọma karịa?
Maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, saịtị, blọọgụ, wdg na nkwukọrịta email ha, enweelarị ụdị akọwapụtara na usoro nke ọrụ ha. Cheedị ngwa ebe onye njikwa akara ụlọ ọrụ nwere ike ịpị mpempe akwụkwọ ụdị ha na ngwa ma "dezie n'ọnọdụ" ka ndị ọzọ?! Nke ahụ ọ́ gaghị abụ nrọ ka o mezuru?
Edezi n'ezie ga-ala ka ederede na oyiyi… ọnụ ọgụgụ nke bọtịnụ na menus nwere ike kpamkpam oke. Maka ụfọdụ, ikekwe ọ bụ ederede doro anya na enyere ndị folks aka ka ha banye na ihe ọ bụla ọzọ!
Onye dị njikere ịrụ ya?
Tags: CMSọdịnaya managementusoro nlekọta ọdịnayadezie-na-ebenchịkọta akụkọeditọ HTMLederede nchịkọta akụkọ